Caawinaad ilmaha caqabada neerfo maskaxeedka -
Qoysu wuxuu ka kooban yahay hooyo, aabe iyo labo wiil. wakhtiyadii danbe wiilashii ayaa caqabad qabsatey. Wiilashii midkood ayaa dhibaato xaga foojignaanta qabsatey wuxuuna noqdey mid si sahalan ugu dagaalama iskuulkii. Macalimiintii iyo anshax dhowraha iskuulkaba waxay u yeereen waalidkii si ay ugala hadlaan waxayna soo jeediyeen iney wadajir ula xiriiraan daryeelka arrimaha bulshada. Waalidku markii hore waxay ka qabeen shaki masuuliyiinta, balse si dhaqso ayey waxay ku arkeen in, daryeelka bulshada, daryeelka caafimaadka iyo iskuulkiiba ay u heleen qaab lagu caawiyo qoskii oo dhan.
Walwalka waalidka ee ubadkooda
Reerku waxay galeen labo geedi wakhti yar guduhiis iyagoo u guurayey shaqada aabaha dartiis. Aabuhu wuxuu shaqeeya gelingelin inta badana ma joogo guriga. Wiilka yar waa 6-jir wuxuuna guriga la joogaa hooyada. Waxaa fuuley miisaan/cayil waxaa kamaqan rabitaan sameynta barashada arrimo cusub. Wiilkii wuxuu ku fikirayaa inuu kuwa kale kaliito mana rabo tusaale inuu barto wadista baaskiilka.
Walwal badan ayaa waalidkii kasoo wajahay wiilka 11-jirka. Dhigashadii iskuulku ma wanaagsana. Waxbarashadana uma foojigna waxaana ku adkaadey inuu waxbarto. Geediga iyo iskuulka loo wareejiyey waxay sii adkeysey xaaladiisa.
Waalidkii ayaa laga codsadey iney wadahadal ugu yimaadaan macalinka iyo anshax dhowra iskuulka. Waxay soojeediyeen in wiilka baaris loo diro. Hooyadu waxay aaminsaneed iney iyada tahay qofka sida fiican u fahmaya waxa wiilkeedu u baahan yahay. Wadahadal kadib waalidkii waxay aqbaleen, in cilminafsiga iskuulku uu gudbiyo wiilkii kadibna wuxuu heley baaritaan.
Dhibaato xal baa loo helaa
Baaritaankii caafimaad ayaa waxaa lagu ogaadey in, wiilka iney jirto caqabad caadiya oo dhanka kobaca neerfayaasha, taasoo lagu sheegey Aspergerin oireyhtymä/ cuddurka Asperger. Sababtaas ayaana keentey in wiilkii qaaab dhaqameedkiisu noqdey mid ka duwan kuwa kale, waxayna sababtey qalad fahan iyo isku dhac isaga iyo ardeydii iskuulka la dhiganeysey. Wiilku ma garaneyneyn qaabkuu dareenkiisa ku muujin lahaa xaalada dhibaato ee heysata inuu gacan qaado mooyee. Waalidka waxaa loo sheegey in, ay muhiim tahay siduu wiilku waxbarsho u helo una barto qaab kale oo uu dareenkiisa ku muujin karo ee uusan feer wax ku muujin.
Reerkii waxaa loo direy si uu caawinaada uu wiilku u baahan yahay nolol maalmeedkiisa in laga diyaariyo neerfaha maskaxda neuropsykiatriseen (NEPSY), waalidkiina loo sheego qaabka ay ku caawin lahaayeen wiilkooda ama ay ku hagi lahaayeen. Wiilkii wuxuu heleyaa tababare nepsy oo 10 jeer tababara. Sidoo kalena waalidka waxaa lagula heshiiyey in wadajir loo waco daryeelka arrimaha bulshada si loo weydiiyo caawinaadaha kale ee ay qoysku heli karaan xaaladan ay ku jiraan.
Reerkoo idil baa la caawinayaa
Adeega arrimaha bulshada ayaa waxay u soojeediyeen waalidkii in qoyska lagu soo booqdo guriga oo lala sheekeysto. Wadahadalkaasna waxaa looga dhageysanayaa qoyskii baahidooda, hooyadiina waxay sheegtey in ay daashey. Hooyada aad bey u farxadgelisey markey dareentey sooshalku iney qoyska dhan daneynayaan xaaladooda iyo sidii ay ku caawin lahaayeen wiilka yar. Waxaa loo sameeyey qorshe qiimeyn waxay u baahan yihiin, waxaana lagu heshiiyey reerka lagu caawiyo adeegaha qoyska.
Adeegaha qoyska ayaa markiiba billaabey inuu tako hoygii qoyska isbuuc walba. Waxay ka caawineysa sidey u xakameyn lahaayeen wiilka qaab dhaqameedkiisa sameeyaana sida tababaraha nepsy kula taliyo. Wiilka waxaa sidoo kale laga taakuleynayaa dhigashada iskuulka, wakhti yar kadibna waxaa wanaagsanaatey iskuul dhigashadiisa. Wiilkii wuxuu bartey la dhaqanka ardeydii kale.
Wiilkii yaranaa wuxuu bilaabayaa fasalkii tarbiyada hore esiopetus. Labo billood kadib wiilkii wuxuu sheegey, inuu rabo inuu barto wadista baaskiilka si uu saaxibadiisa fasalka ula kaxeysto baaskiil. Waalidkiina culeys baa ka degey in, dhibaatadii loo heley xal. Waalidkii waxay go’aansadeen iney fasax dalxiis ah dalbadaan. si waalidkuna wakhti isugu helaan.